November 2018 - Page 19 of 21 -
Taliyaha Booliska Degmada Kaaraan Oo Xilkii Laga Qaaday Iyo Xiisad Ka Taagan Isbedelkaasi
November 4, 2018 F.G 0
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday Taliyihii hore ee ciidanka booliiska degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, waxaana saldhigaasi loo magacaabay taliye cusub . Taliye Canjeex oo horay u ahaa taliyaha saldhiga Booliska Degmada Kaaraan ayaa xilkii laga qaaday waxaana loo magacaabay Taliye Cabdi Shiikh Ciise oo kamid ah saraakiisha ciidamada Booliska Soomaaliyeed. Wararka ayaa sheegaya in Taliyaha Cusub ee Saldhiga Booliska degmada Kaaraan uu la dhashay Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise Kaba Kudukade oo ah Gudoomiyaha Shabaab ugu Magacaaban Gobolka Shabellaha dhexe. Kadib markii ay soo baxday Magacaabista taliyaha Saldhiga Booliska degmada Kaaraan ayaa waxaa xilka qaadista ka biyo diiday taliyihii Saldhigaas ee Canjeex,waxaana warar aan heleyno ay sheegayaan in Ciidamo farabadan oo boolis ah uu ku heysto banaanka hore ee Saldhiga Isbadalkaan lagu sameeyay Taliyaha saldhiga booliska degmada Kaaraan ayaa imaanayo iyadoo maamulka Gobolka Banaadir uu wado darder cusub oo uu ku doonayo in uu ku xasiliyo amaanka degmooyinka Gobolka uu ka koobanyahay.
Sucuudiga Oo Xabsiga Ka Soo Daayay Khaalid Bin Talaal
Khaalid Bin Talaal oo kamid ah qoyska boqortooyada Sucuudiga oo horraan loo xiray inuu kasoo horjeeday howlgalka ka dhan musuq maasuqa ayaa lagu soo warramaya in xabsiga laga soo daayay. Qoyska Khaalid bin Talaal waxay baraha bulshada soo geliyeen sawirro muujinaya dhaxal sugaha oo salaamaya eheladiisa. Dhaxal sugahan ayaa ah wiilka uu dhalay boqorka Salmaa walalkiis. Al Waliid oo la dhashay Khaalid wuxuu kamid ahaa tiro dad ah oo kamid ah qoyska reer boqor iyo mas’uuliyiin sar sare oo lagu eedeyay musuq maasuq kuwaaso xabsiga la dhigay sannadkii tagey. Arrintani ayaa imaaneysa xilli uu cadaadis caalami ah saaran yahay dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan oo ku aadan dilkii loo geystay Jamaal Khaashuqji. Dadka ka faalooda siyaasadda gobolka waxay sheegayaan in mas’uuliyiinta Sucuudiga ay isku dayayaan inay dejiyaan qalalaasaha ka dhex taagaan qoyska si ay dhexdooda garab siyaasadeed isaga helaan. Sawirro ay baraha bulshada soo geliyeen qoyska Khaalid ayaa muujinaya isaga oo la joogo wiilkiisa oo muddo sannoyin ah kooma ku jiray. Dowladda Sucuudiga war rasmi ah kama aysan soo saarin sii deeynta Talaal. Wargeyska Wall [Sii aqri]
Xildhibaan C/risaaq “NISA Waxay Isku Bedeshay Hey’adda Lagu Caburiyo, Bulshada Laguna Cabsi Geliyo Siyaasiyiinta”
Wasiirkii hore ee Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay Hey’adda NISA oo lagu hakiyay qandaraas la sheegay inuu saxiixay sanado ka hor. Xildhibaan C/risaaq Cumar ayaa sheegay inuu xilka wareejiyay bishii April ee sanadkii 2017, isagoo is weydiiyay sababta xilligan looga hadlay qandaraas uu horay u bixiyay sida uu hadalka u dhigay. “Bishii April 4-teeda 2017 ayaa xilka wareejiyay ku dhowaad labo sano lagama hadlin, waxaa is weydiin mudan maxaa hada looga hadlayaa qandaraas la bixiyay oo la leeyahay wasiirki hore bixiyay, sababta wax kale ma ahan waxaa la rabaa in magaca laga dilo in dadka la cabsi geliyo, gaar ahaan siyaasiyiin, si aysan fikirkooda iyo dhaliilaha ay u soo jeediyaan dowladda aan loo soo jeedin, intaas waaye sababta ka dambeysa”ayuu yiri Xildhibaan C/risaaq Cumar. Waxaa uu sheegay inuu kalsooni isku qabo, isla markaana aanay jirin qandaraas lagu bixiyay sharci daro, wax walba loo maray nidaam waafaqsan sharciga sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan C/risaaq Cumar ayaa sheegay in Hey’adda NISA ay [Sii aqri]
Dowlada Jarmalka Oo Ku Bixinaya Dhaqaale Malaayiin Dollar ah Wax barasho Dhinaca Farsamada Gacanta ah
Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in ay dowlada Soomaaliya ay ka taageerayso tababarka farsamada gacanta. Qoraal laga soo saaray safaarada Jarmalka ee dalka Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in dowlada Jarmalku ku bixineyo lacag gaareysa shan malyan oo dollar tababarka farsamada gacanta. 9-kii October ee sanadkan, Soomaaliya iyo Jarmalka ayaa gaaray laba heshiis oo dhinaca tababarada farsamada gacanta looga caawinayo Soomaaliya iyo kan kale oo ahaa heshiis ku saabsan dhinaca iskaashiga maaliyadda iyo dowlad wanaaga. Dowlada Jarmalka ayaa hore magaalada Muqdisho uga hirgelisay machad lagu barto farsamada warshadaha Iyo Sameeynta Dhinaca Korontada Waana Arrin wanaagsan Hadii ay Suurta Gasho arrinkaani.
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweyne Xaaf Oo Ku wajahan Magaalada Gaalkacyo
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) iyo Madaxa Xukuumada Galmudug Shiikh Axmed Shaakir Cali Xasan ayaa la filaayaa in ay maanta tagaan Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug halkaaas oo ay kaga qeyb geli doonaan shir lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka maalmihii dambe maamulkaasi kasoo cusboonaaday. Wararka ayaa sheegaya in Magaalada Gaalkacyo ay kula kulmi doonaan Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoowe u qaabilsan Soomaaliya oo dhawaanahaani booqanaayay maamul goboleedyada dalka ka jira isagoo kala hadlaayay sidii loo xalin lahaa mad madowga soo kala dhex galay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waxaa hori loo siii qorsheenayay in wafdiga Qaramada Midoowe ee uu Haysom hogaaminaayo in ay booqasho ku tagaan Magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka Galmudug balse Gaadiid aan xabadu karin oo ay UN-KU leeeyihiin laga celiyay Koontaroolka Waqooyi ee Magaalada Cadaado oo ay gacanta ku haayaan garabka kale ee Galmudug. Hadii madaxweyne Xaaf uu booqashadaan dhanka cirka ah uu ku tago Magaalada Gaalkacyo waxay noqonaysaa markii labaad mudo bil gudaheeda ah oo uu Xaaf tago Magaalada Gaalkacyo
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Oo Gaaray Magalada Hargeysa
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa ee Somaliland. Socdaalka Haysom ayaa qeyb ka ah safaro uu ku marayo xarumaha maamulada dalka ka jira, inkastoo Somaliland ku dhawaaqday gooni uga go’day Soomaaliya inteeda kale. Nicholas Haysom ayaa la kulmay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan oo quseeya xiriirka wadashaqeyn ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Qaramada Midoobey.
Dalka Gabon Oo Laga Cabsi Qabo in Dagaal Sokeeye uu Ka Dhaco
November 4, 2018 M.Jo 0
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Gabon, Jean Ping, ayaa markale ku andacooday inuu ku guuleystay doorashooyinkii la qabtay sanadkii 2016ka, xilli Madaxweyne Cali Bongo lagu dabiibayo isbitaal ku yaalla dalka dibeddiisa. Mar uu ka hadlayay Magaalada Libreville, ayuu Mr Ping waxaa u dadkiisa ugu baaqay inay ka adkaadan kala qeybsanaanta ayna ku midoobaan danta guud. Waxaa u sheegay in mowqifkaasi uu ahaa midkii uu soo bandhigay doorashadii 2016ka, waxaa uuna intaasi ku daray in u yahay qofka ku guuleystay codadka ugu badan. Dibedbaxyo ay dhiig ku daateen ayaa dalkaasi ka dhacay kaddib markii Madaxweyne Bongo lagu dhawaaqay inuu xaddi aanan sidaasi u badnayn ugu guuleystay doorashada. Mr Bongo, oo qoyskiisa uu dalkan galbeedka Afrika ku yaalla ka talinayay 50-kii sano ee la soo dhafay ayaa haatan lagu daaweynaya isbitaal ku yaal Magaalada Riyadh ee dalka Sucuudiga. Ilaa iyo hadda lama hayo war rasmi ah oo ku saabsan xaaladda Madaxweynaha uu ku sugan yahay tan iyo markii la shaaciyay 10 maalmood ka hor in uu aad u daalanyahay sidoo kalena uu u baahan yahay nasiino. Kaddib doorashadii 2016-ka, [Sii aqri]
101 Kufsi ayaa Sannadkan 2018 ka Dhacay Guud ahaan Somaliland
Ciidamada booliska Somaliland ayaa maanta soo bandhigay tirakoobka falal-dambiyeedyadii sannadkan (2018) ka dhacay guud ahaan Somaliland iyo tirada dilalka ka dhacay. Ilaa 19,664 dhacdo ayaa la sheegay inay ka dhaceen guud ahaan Somaliland sannadkan 2018-ka, kuwaasi 61 kamid ah ay yihiin Dil, halka 101 kamid ah dambiyadaasna ay yihiin Kufsiyo. Falalka dilka ayaa loo qabtay 55 eedaysane halka la raadinayo 5 ruux oo kale, sidoo kale falalka kufsiga ayaa loo qabtay 87 eedaysane hase ahaatee waxaa ku eedaysan falalka kufsiga 105 ruux kuwaasi oo uu ku jiro kufsi wadareed. Falalka kufsiyada ayaa hoos u dhacay marka la barbar dhigo sannadkii hore iyadoo ay sannadkii hore dhaceen 108 kufsi sida ay boolisku sheegeen. Dhinaca kale, boolisku waxay sheegeen in sanadkan ay Somaliland ka dhaceen 3,457 shil kuwaasi oo ay ku dhinteen 161 ruux waxaana ku dhaawacmay 2,255 ruux. ayada uu Booliska Somaliland ayaa xusayay sanad guuradii 25aad ee kasoo wareegtay markii la aas-aasay ciidankaasi.
Maxkamada Gobolka Banaadir Oo Xukun Ku Riday Mas’uuliyiin Lagu Eedeeyay Musuq Maasuq
Maxkamada Gobolka Banaadir ayaa soo gaba gabeysay dacwad la xiriirta musuq maasuq oo loo heystay mas’uuliyiin ka tirsan Waaxda Canshuuraha ee dekada Muqdisho iyo Wasaaradda Gargaarka iyo maareynta musiibooyinka. Waxaa ka mid ah mas’uuliyiinta musuq maasuqa lagu eedeeyay ee xukunka lagu riday Maamulihii hore ee Furdada Xamar Axmed C/llaahi Samow iyo xubno kale oo la shaqeynayey oo gaaraya 8 Xubnood Maamulihii hore ee Furdada Xamar Axmed C/llaahi Samow iyo xubno kale oo la shaqeynayey ayaa mid kiiba waxaa lagu xukumay min Saddex sano oo Xabsi ah halka lasii daayay 2 kale oo ay ka mid tahay Haweeney ku xigeen ka aheyd waaxda Canshuuraha ee dekada Muqdisho sida uu sheegay Guddoomiyaha Maxkamada Gobolka Banaadir. Dhinaca kale Waxaa Maxkamadu min Saddex Sano iyo Saddex biloo oo Xabsi ah ku riday agaasime waaxeedkii Wasaaradda gargaarka iyo Musiibooyinka Daahir Maamed Nuur iyo nin kale oo lagu magacaabo Mohamed Cumar. Mas’uuliyiintaan xukunka lagu riday ayaa dacwadooda waxa ay soo socotay mudo dhowr bilood ah balse ugu dambeyn la soo gaba gabeeyay waana mas’uuliyiintii ugu horeysay oo Maxkamada Gobolka Banaadir oo ay xukun [Sii aqri]
Dagaal Beeleed Ka Dhacay Gobolka Galgaduud Oo u Muuqda Mid Xal Laga Gaaray
Waxaa Jiro In xal laga gaaray dagaal beeleedyo horay uga dhacay deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud kaas oo sababay dhimashada dad badan iyo barakaca kuwo kale. Maamulka degmada Xeraale iyo Odayaal ka yimid deegaano hoostaga degmada Cadaado ayaa Xeraale ku qabtay kulan beelahaas lagu heshiisiinayay,waxaana shirkaasi laga soo saaray qodobo horudhac ah oo lagu heshiisiinayay labadaasi beelood Guddoomiyaha deegaanka Xeraale Bashiir Daahir Dhagabadan ayaa sheegay in dagaal beeleedkaas ay qeyb ka ahaayeen Ururkii Ahlusunna ee ku biiray Maamulka Galmudug,isla markaana ugu dambeyn xal laga gaaray. Waxa uu sheegay in shirka beelahaas lagu heshiisiinayay uu socday mudo ka badan Saddex bilood ah,hayeeshee uu sheegay in Maalinta berito ah shirkaasi la soo gaba gabeyn doono,isla markaana qodobo laga soo saari doono. Dagaalka ka dhacay deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud ayaa dhacay tiro ka dhowr jeer waxaana markii hore uu ahaa mid lagu tilmaamayay inuu u dhaxeeyay Ciidamo kala taabacsanaa Galmudug iyo Ahlusunna oo ku biirtay balse markii dambe ay ku baxeen waxgarad ka soo jeeda Gobolka Galgaduud.